Indlu enomtsalane eLanciano - I-Airbnb
Indlu enomtsalane eLanciano
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguValeria
Le ndlu ikwiziko lembali, phakathi kwendawo ephakathi eSacca naseCivitanova. Ukuphosa ilitye ukusuka embindini, kwindawo ezolileyo nenoxolo. Indlu izimele kwaye ihlaziywe, igcina imigangatho yezitena zezindlu
Indlu ehlaziywe ngokupheleleyo, eyakhiwe kumanqanaba ama-3: umgangatho ophantsi yimpawu kunye nekhitshi ebanzi enendawo yomlilo kunye nekhitshi apho ungatya khona isidlo sakusasa, isidlo sasemini okanye isidlo sakusihlwa. Ngomoya we-ceiling air carriage atmosphere kule ndawo ikhuthaza ngokwenene, ukonwabela amaxesha angenakulibaleka. Kweli gumbi kukho nebhedi yesofa etofotofo. Ukunyuka izinyuko ezimbalwa sizifumana sikumgangatho wokuqala kunye negumbi lokulala elikhulu kunye negumbi lokuhlambela langoku elineshawa enkulu. Igumbi lipholile kwaye liqaqambile ngenxa yesilingi yeplanga kunye nesibhakabhaka esihluza imitha yelanga. Ukongeza kukho i-balcony apho ukonwabela umbono webhanki. Kumgangatho wesibini kukho indawo ephakamileyo enokufikelela kwi-terrace, apho unokuchitha iiyure zokuphumla phambi kwe-aperitif efanelekileyo.
4.84 · Izimvo eziyi-60
Iziko lembali laseLanciano lihlukaniswe kwi-4 Quertier: i-Borgo, i-Civitanova, i-Sack kunye ne-Lancianovecchia. Iintsimbi ziphakathi kwebhegi kunye neCivitanova. Kumgama wokuhamba kukho iCawe yaseSanta Maria Maggiore, ethathwa njengenye yezona zikhumbuzo zibalulekileyo ze-Abruzzo kunye neyona cawa inomdla esixekweni. Eyona nto imangalisayo yecawa yi-facade ye-Gothic ye-lancianese enkulu uFrancesco Petrini, eyakhiwe ngenkulungwane yeshumi elinesine, kunye ne-portal ehle kakhulu eyaqala ngo-1317. Ebumelwaneni uya kufumana iCawa yaseSt. ukusuka kwihlabathi liphela ukuze uMmangaliso woMthendeleko.
Mi è sempre piaciuto viaggiare e, da quando qualche anno fa, sono tornata a casa, a Lanciano per restarci, ho deciso che avrei voluto aprire una struttura per far conoscere la mia…
Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukukunika iingcebiso kunye neengcebiso zokwazisa iindwendwe kwisixeko sethu esihle, mhlawumbi sithathe ithuba leendawo zokutyela ezininzi eziya kucebisa!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lanciano